प्रेमीलाई जेलबाट भगाउन सुटकेशभित्र कोचिएपछि….! « Surya Khabar
प्रेमीलाई जेलबाट भगाउन सुटकेशभित्र कोचिएपछि….!
काठमाण्डौ । केटा होस् चाहे केटी । प्रेममा बाँधिएका छन् भने कसैले पनि आफ्नो प्रेमी प्रेमिका जेलभित्र कोचिएर बसेको मन पराउँदैनन् । सकेसम्म उनीहरु कानुनीरुपमै जेलमुक्त गराउन खोज्छन् । यदि सकेनन् भने गैरकानुनी बाटो अवलम्बन गर्न पनि पछि पर्दैनन् । तर भेनेजुयलामा एक जना प्रेमिकाले आफ्नो प्रेमीलाई जेलबाट भगाउन खोजेको तरिका भने अत्यन्तै अनौठो छ । जुन यहाँ उल्लेख गर्न खोजिरहेका छौं ।
भेनेजुयलाको उत्तरपूर्वस्थित जोसे एन्टोनियो एन्जोआटेन्गुइ जेलभित्र थुनिएका थिए इब्राहिम जोसे भार्गस गार्सिया । उनकी प्रेमिका हुन् २५ वर्षीया एन्टोनिटा रोब्लेस साउदा । प्रेमी इब्राहिम कार चोरीको आरोपमा पक्राउ परेपछि उनलाई पर्नु पिर परेको थियो । झन उनलाई अदालतले नै ९ वर्षको जेल सजाय सुनाएपछि उनी विक्षिप्त अवस्थामा पुगिन् । उनले प्रेमी जोसेलाई छुटाउन गरेको प्रयास पनि सफल हुन सकेको थिएन । एक दिन उनी आफ्नो प्रेमी भेट्न जेलभित्र गइन् ।
उनको साथमा थियो ठूलो सुटकेस । सुटकेसभित्र उनले कपडा पनि टन्नै राखेकी थिइन् । गुलाबी रंगको सुटकेश लिएर जेलभित्र पसेकी एन्टोनिटा आधा घन्टा जेलभित्रै बसिन् । उनका गतिविधिलाई कसैले पनि ध्यान दिएनन् । आधा घण्टापछि उनी जेलबाट बाहिरिन् । उनले सकी नसकी सुटकेस घिसारिरहेकी थिइन् । शनिबारको राजधानीमा लेखिएको छ, त्यो दृश्य देखेका एक जना सुरक्षा गार्डले शंका लागेर सुटकेश खोल्न लगाए। जब उनले सुटकेस खोलिन्, सुटकेस भारी हुनुको पोल खुल्यो । सुटकेसमा उनकै प्रेमी बसेका थिए । उनी अत्यन्तै अप्ठेरो साथ पोको परेर बसेका थिए । प्रेमीलाई अप्ठेरो नहोस् भनेर उनले टन्नै कपडा राखेकी थिइन् । त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले तुरुन्तै इब्राहिमलाई जेलभित्र हुले । उनकी प्रेमिका एन्टोनिटालाई पनि पक्राउ गरे ।